SomaliTalk.com » 2015 » April » 22
Home » Archive Maalinta April 22nd, 2015
Documentary-gan qaybo kamid ah horaa loo daabacay, hadase waa markii ugu horaysay oo isagoo dhamaystiran la faafiyey, muhiimadiisa darteed ayaana keentay in markale la faafiyo, wuxuu sawir buuxa kaa siin doonaa Caalimkii Sh. Abdulqaadir kumuu ahaa iyo faafinta dacwada Islaamka muxuu ugu fadhiyey. Muuqaal taariikhan (Documentary) kan wuxuu ka hadlayaa dowrkii dacwada Soomaaliya uu kulahaa Sh. Cabdulqaadir...
Halkudheg: dhooye, sh. Cabdulqaadir
Muqdisho, ..Wasiirka Difaaca Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, oo weheliyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Difaaca Mudane Cabdalla Xuseen Cali, ayaa maanta kormeer howlleed ku tagey xarunta Ciidamadda Badda Soomaaliya, taas oo ku taala Dekaddii hore ee Muqdisho, isagoona kormeray qalabka iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan Ciidamadda Badda. Wasiirka ayaa ugu horeyn booqday doomo ay leeyihiin Ciidamadda...
Nadwadii Shiicada Rowda Boosaaso ka socotay oo lasoo gabagabeeyay, bayaanna laga soo saaray
Waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada boosaaso Nadwadii 13aad ee ka scotay magaalada boosaaso. Waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada boosaaso Nadwadii 13aad ee ka scotay magaalada boosaaso. Ugu horrayn waxa ka hadaly madasha guddoomiyaha Mu’asasada Al-Minhaaj Sh.Maxamad Cabdulaahi, wuxuuna xusay nadwada xilligii lasoo bilaabay iyo sida magacanadwada sannadkan loogu doortay, inta kadib...
Halkudheg: al-minhaaj, Bosaso, rowdah